PayPal Mobile Cash: Send and Request Money Fast 7.12.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.12.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ေငြေရးေၾကးေရး PayPal Mobile Cash: Send and Request Money Fast
PayPal Mobile Cash: Send and Request Money Fast ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်လာသော app ကိုနှင့်အတူ, သင်လိုချင်တဲ့အဆင်ပြေစေရန်, သင် PayPal ကထဲကနေယုံကြည်ကိုးစားခြင်းငှါလာကြပါဘူးလုံခြုံငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာနှင့်အတူတွဲရပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ဘဏ်အကောင့်သို့မဟုတ်ချိန်ခွင်လျှာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ US ရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုမှပိုက်ဆံမပို့ရသောအခါ Plus အားမရှိငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေရှိပါတယ်။
လုံလုံခြုံခြုံ encryption ကိုနည်းပညာ
လက်ဗွေရာနှင့် Two-factor authentication (active လိုအပ်)
ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်သို့မဟုတ် PayPal ကချိန်ခွင်လျှာကို အသုံးပြု. အမေရိကန်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုမှပိုက်ဆံပို့ပေးရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေကြမ်း၏သင့်ရဲ့ရှယ်ယာတက်သည်ဆွ, တစ်ဦးထံမှချစ်ရသူတစ်ဦးငွေဆုကြေးဇူးကို, သို့မဟုတ်တောင်းဆိုချက်ကိုပိုက်ဆံပေးပို့
သင်မသိသောတစ်စုံတစ်ယောက်မှပိုက်ဆံပေးပို့ခြင်း? PayPal ကနှင့်အတူ, သငျသညျယုံကြည်မှုနှင့်အတူကပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ကုန်စည် & Services မှရွေးချယ်ခြင်းသည့်အခါ, သင့်ရထိုက်ခွင့်ပိုက်ဆံအရောင်းအအရစ်ကျကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်ပေးပို့ပါ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အန့်သတ်ချက်များသက်ဆိုင်ပါသည်။ လက်ခံသူတစ်ဦးအား PayPal အကောင့်မရှိပါဘူးလျှင်, အခမဲ့လွယ်ကူစွာတစ်ဦးဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
THE PayPal ငွေကြေးကတ်ချက်ချင်းသင်၏ငွေလက်ကျန် Access
အလွယ်တကူသင်၏ PayPal အကောင့်သင်၏ဘဏ်များထံမှရန်ပုံငွေများလွှဲပြောင်းနှင့် PayPal ကငွေကဒ်နှင့်သင်၏ဟန်ချက်ကိုဝင်ရောက်။ Mastercard လက်ခံသည်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆို, In-store ကိုစျေးဝယ်။ Plus အား, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ATM စက်များမှာသင်၏ PayPal ရန်ပုံငွေများရုပ်သိမ်းပေးရန်။
* ကမ္ဘာတဝှမ်း PayPal အကောင့်ငွေပို့
ကျနော်တို့နိုင်ငံတကာကပိုက်ဆံပို့ပေးရန်လွယ်ကူစေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်အခကြေးငွေနှင့်သင်၏ဒေါ်လာစျေး၏တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးကိုကူညီငွေကြေးတစ်ခုအကွာအဝေးကနေရွေးချယ်ပါ။ ပေးပို့သူနဲ့လက်ခံမဲ့သူတစ်ဦးအား PayPal အကောင့်ရှိရမည်။
PayPal Mobile Cash: Send and Request Money Fast အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PayPal Mobile Cash: Send and Request Money Fast အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PayPal Mobile Cash: Send and Request Money Fast အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
PayPal Mobile Cash: Send and Request Money Fast အား အခ်က္ျပပါ
killershout စတိုး 1.31k 461.27k
PayPal Mobile Cash: Send and Request Money Fast ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PayPal Mobile Cash: Send and Request Money Fast အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.12.0
ထုတ်လုပ်သူ PayPal Mobile
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
လက်မှတ် SHA1: 6B:AC:E2:77:8C:C5:C1:05:B2:A4:42:50:BD:CF:FF:5C:4D:5C:40:3A
အဖွဲ့အစည်း (O): Paypal
PayPal Mobile Cash: Send and Request Money Fast APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ